Expand Your Global Knowledge (University of Mahidol) - Crown Education
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နာမည်ကျော်ကြား လူသိများသည့် University of Mahidol တွင် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် ယခင်က Master of Healthcare & Wellness Management ဘာသာရပ်ကိုသာ သင်ကြားခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခု၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စတင်ကာ Master of Leadership and Human Resource Management ဘာသာရပ်ကိုပါ ရွေးချယ် သင်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Mahidol University ရဲ့ College of Management Mahidol University ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြန်ဆန်တဲ့ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ၁၉၉၆ခုနှစ်ကတည်းက စတည်ထောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် Master Program နဲ့ Ph.D Programများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျွမ်းကျင်သူများစွာ ပေါ်ထွက်လာစေရန် သင်ကြားပေးနေသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Mahidol Universityမှာ သင်ကြားပေးနေတဲ့ Master of Healthcare & Wellness Management Programကို ဘယ်သူတွေတက်ရောက်သင့်လဲ?
Siriraj Hospital, Ramathiboodi Hospital and the College of Management အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းများရှိတဲ့အပြင် Mahidol Universityရဲ့ Healthcare & Wellness Management ဘာသာရပ်ဟာဆိုရင် နိုင်ငံတကာရှိ ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကုထုံးများကို နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ များဖြင့် လက်တွေ့ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးမှုကြောင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအကြား တက်ရောက်မှုများပြားတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ် ယနေ့ထိတိုင် ရပ်တည်လျက်ရှိနေပါတယ်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် Medical Director, Spa Manager, Wellness Manager, Wellness Director, Nursing Manager, Nursing Directorရာထူးများဖြင့် ဦးဆောင်လိုသူများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်သို့ တိုးမြှင့်တာဝန် ထမ်းဆောင်လိုသူ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများအတွက် တက်ရောက် ပြင်ဆင်ထားသင့်သည့် ပရိုဂရမ်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် ညွှန်းဆို ပေးလိုက်ပါရစေ။
Master of Leadership and Human Resource Managementကို ဘယ်သူတွေတက်ရောက်သင့်လဲ?
ယနေ့ခေတ် စီးပွားလုပ်ငန်းများမှာ သာမက နယ်ပယ်စုံ ကဏ္ဍစုံမှာ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေရသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ HR Managerများအဖို့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများမှာသာမက နိုင်ငံတကာ Business Corporation အသီးသီးက လူအများနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်အောင် ချဉ်းကပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ Master of Leadership and Human Resource Management Programကို General Managersများ Management Consultants များနှင့် HR Professionalများအဖြစ် ဦးဆောင်လိုသူများအနေနဲ့ မဖြစ်မနေသိရှိထားသင့်တဲ့ Programတစ်ခုအဖြစ်ညွှန်းဆိုပေးလိုက်ပါရစေ…
Master of Leadership and Human Resource Management Programမှာ ဘာတွေအဓိကထားသင်ကြားရမလဲ?
Master of Leadership and Human Resource Management Programမှာ – Organizational Behavior and Human Resource Management, Management Information Systems, Asian Economy in Global Context, Financial Management, Strategic Marketing Management, Strategic Leadership, Strategic Human Resource Management, Reward and Performance Management, Project Management, Soft-skills Development စတာတွေကို Credit 45ခုစာ သင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Master of Healthcare & Wellness Management Program နဲ့ Master of Leadership and Human Resource Management Programတွေရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ကျောင်းဝင်ခွင့်အပြင် ပညာသင်ဆုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို CROWN Education Office အမှတ် ၂၇၅ ၊ ၃ လွှာ ၊ ကမ္ဘောဇတာဝါ ၊ မြေနီကုန်း ကုန်းကျော်တံတားအနီး ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ✆ ဝ၁ ၅၂၇ ၈၃၈ ၊ ဝ၉ ၄၄ ၅၅ ၆၆ ၇ဝ၁၊ ဝ၉ ၄၄ ၅၅ ၆၆ ၇ဝ၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်းလေး ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။